आँखा नदेख्ने साना नानिहरुको यस्तो बिजोक देख्दा कस्को मन रुदैन होला ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/आँखा नदेख्ने साना नानिहरुको यस्तो बिजोक देख्दा कस्को मन रुदैन होला ??
आँखा नदेख्ने साना नानिहरुको यस्तो बिजोक देख्दा कस्को मन रुदैन होला ??
मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई सिंहदेबिको फाङ्दुवा भन्ने ठाउमा एउटा गरिब परिवार छ । घरमा दृस्टीबिहिन साना साना दुई जना छोरीहरु छन । हेर्दा कुपोषण लागेजस्तो देखिने उनिहरुको कहानी कहालीलाग्दो रहेको छ । आमा र दुई छोरीहरुको यति बिजोक छ कि सुन्दा सबैको आँखा रसाउने खालको छ । आमा पनि दुबै आँखा देख्दिनन ।
साना नानिहरुकि आमा हिडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छिन भने बुबाले दुई बर्ष अगाडि नै यो सन्सार छाडेर गएका थिए । साना बालिकाहरुका बुबाले उनिहरुलाई एक्लै पारेर सन्सारै छाडेर गएपछी झनै बिजोक बनेको परिवारमा कसैको साथ छैन । आमाको हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन छोरिहरु साना त्यसमाथी आँखा देख्दैनन । सारै दुर्गम ठाउँ यातायात स्वास्थ शिक्षा सबै कुराको अभाव छ ।
नानीहरुको ठाउमा आफुलाइ यस्तो अवस्थामा राखेर सम्झनुहोस त कस्तो होला । सम्झनै नसकिने कहालीलाग्दो अवस्थामा गुज्रिएको परिवारको बिजोक छ । लेटाङ निवासी समाजसेवि शान्ति पाख्रीनले पहिलोपटक सामाजिक संजाल फेसबुकमा नानिहरुको निकै कारुणिक फोटो हालेपछी रातारात भाइरल नै बनेपछी दमकमा एक रुपैयाँमा सुत्न कोठाको ब्यबस्था पाँच रुपैयाँमा सादा खाना दसमा मासुभात खुवाएर मृगौला पिडित शुक्रराज लिम्बुको सहयोग गरिरहेका समाजसेवी कुमार राई योबन गुरुङ र सुपर अनलाइन टिभिका संचारकर्मी तथा कलाकार समीर सुबेदीको टोलि केही सहयोग लिएर ती साना नानिहरुकोमा गएका छन ।
तपाई पनि नानीहरुलाई केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सुपर अनलाइन टिभीका समीर सुवेदीलाई 9814930736, ९८१४९३०७३६ मा सम्पर्क गरेर गर्नुहोला । त्यसैगरी शान्ति पाख्रीन कुमार राईलाई सम्पर्क गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
सुदूर पश्चिममा कोरोनाको जाे`खिम बढेपछि राजधानीबाट ३३ जना डाक्टरको टोली धनगढी पुग्यो
बिवाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतीले एक`पटक पनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले छोडे संसार
BREAKING NEWS: कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर गएपछी जिल्लामै पहिलोपटक सेना परिचालन गर्दै कर्फ्यू घोषणा !
अरिङ्गालको टो’काईबाट निधन भएको १३ वर्षीया बालिका अतिथि शर्माको अन्त्यष्टि